Ukulawula kobumfihlo | Izilungiselelo zobumfihlo ze-Google
Unezilawuli zokuphatha ubumfihlo bakho.
Sisebenzisa idatha ukwenza amasevisi ethu ukuthi abaluleke kakhulu, kodwa uyanquma ukuthi uluphi uhlobo lwedatha esiluqoqayo futhi silusebenzise. Sakha i-akhawunti yami ukukunika ukufinyelela okusheshayo ukusebenzisa kalula amathuluzi akusiza ukuphatha ubumfihlo nokuphepha kwakho. Uyanquma ukuthi idatha yakho ingenza kanjani amasevisi e-Google akusebenzele kangcono ngokubuyekeza izilungiselelo ezilandelayo.
Iya ku-akhawunti yami
Phatha izilungiselelo zakho zobumfihlo ngesihloli sobumfihlo
Kumaminithi ambalwa nje, ungaphatha izinhlobo zedatha eziqoqwa yi-Google, ubuyekeze ukuthi yiluphi ulwazi owabelana ngalo nabangani noma wenze okusesidlangalaleni, uphinde ulungise izinhlobo zezikhangiso ongathanda ukuthi i-Google ikubonise zona. Ungaguqula lezi zilungiselelo kaningi ngendlela ofuna ngayo.
Thatha uhlolo lobumfihlo
Vikela i-akhawunti yakho ngokuhlola kobumfihlo
Into yokuqala ongayenza ukuze uvikele i-Akhawunti yakho ye-Google ukwenza ukuhlolwa kwezokuvikela. Siyakhele ukukusiza ukuthi uqinisekise ulwazi lwakho lokutakula lusesikhathini nokuthi amawebhusayithi, izinhlelo zokusebenza, namadivayisi axhumeke ku-akhawunti yakho kusese yiwo owasebenzisayo nowathembayo. Uma ngabe okuthile kubukeka kusoleka, ungaguqula izilungiselelo zakho noma iphasiwedi ngokushe Uhlolo lokuphepha luthatha amaminithi ambalwa, futhi ungakwenza kaningi ngendlela ofuna ngayo.
Thatha ukuhlola kokuvikela
Nquma ukuthi iyiphi idatha ephathelene ne-akhawunti yakho
Kusuka ezinkethweni zokuhamba ezingcono kumamephu kuya kumiphumela esheshayo kusesho, idatha esiyilondolozayo nge-akhawunti yakho ingenza amasevisi e-Google abelusizo kakhulu kuwe. Ukusebenzisa izilawuli zomsebenzi, unganquma ukuthi yini okuphathelana ne-akhawunti yakho futhi simise okwesikhashana ukuqoqwa kwezinhlobo ezithile zedatha — njengosesho lwakho nomsebenzi wokuphequlula, izindawo oya kuzo, nolwazi kusuka kumadivayisi akho.
Iya kuzilawuli zomsebenzi
Kuzilungiselelo zakho zesikhangiso, ungalawula izikhangiso ngokususelwe ezihlokweni onentshiseklo kizo. Isibonelo, uma usebenzisa izilungiselelo zokwenza ngezifiso izikhangiso ukutshela i-Google ukuthi uthanda umculo we-pop, ungahle ubone izikhangiso zokukhishwa okuzayo nemibukiso eduzane nawe uma ungene ngemvume ku-YouTube.
Iya kuzilungiselelo zezikhangiso
Umsebenzi wami kuyindawo emaphakathi lapho ungathola khona izinto oziseshile, ozibukile, nalezo ozibukelile usebenzisa amasevisi ethu. Ukwenza kubelula ukukhumbula umsebenzi wakho wangaphambili we-inthanethi, sikunika amathuluzi ngesihloko, usuku, nomkhiqizo. Ungasula unaphakade imisebenzi ethile noma izihloko zonke ongafuni ukuhlobanisa i-akhawunti yakho nazo.
Iya kumsebenzi wami
Buyekeza ulwazi lwe-akhawunti oluyisisekelo
Lawula ukuthi uluphi ulwazi oluyimfihlo owabelana ngalo kumasevisi e-Google — njengegama lakho, ikheli le-imeyili, nenombol yefoni.
Buyekeza ulwazi lwakho oluyimfihlo
Hamba nokuqukethwe kwakho noma yikuphi ngokuthi Landa Idatha Yakho
Izithombe zakho. Ama-imeyili akho: Oxhumana nabo. Kanye namabhukhimakhi wakho imbala. Nguwe olawula okuqukethwe okugcinwe ku-Akhawunti yakho ye-Google. Yingakho sidale ukulanda idatha yakho — ukuze uzokwazi ukwenza ikhophi, uyenze isipele, noma uyimikise kwenye isevisi.
Iya kokuthi landa idatha yakho